Home » Na-agbasa News Travel » Onye nwụrụ na Maui na ọdọ mmiri asaa a ma ama
Onye amatabeghị nwụrụ na mgbede Tọzdee na Ọdọ mmiri nke Oheo n'àgwàetiti Maui na Hawaii. A na-akpọkarị ọdọ mmiri ndị a ma ama dị ka ọdọ mmiri asaa. Ha nọ na Haleakala National Park na ime ime obodo nke Mpaghara Kipahulu.
Ndị na-aza ajụjụ nke mbụ natara oku banyere onye merụrụ ahụ na ọdọ mmiri mbubreyo ụnyaahụ, ndị ọkụ ọkụ na ndị uwe ojii gara ebe a na-akpọ onye ahụ anwụ.
Amabeghị ma onye ahụ ọ bi ma ọ bụ onye njem.
O di nwute, Osimiri di Nsọ ekwuola onwu ndi ozo.
Na 2003, oke idei mmiri bibiri mmadụ abụọ na - eme njem nleta - nna bụ obere nwa nwanyị - tụfuru mmiri nke mmiri wee nwụọ. Ezinụlọ ndị a gbara akwụkwọ gbara akwụkwọ, gọọmentị etiti kwetakwara na enweghị mmebi iwu na ịkwụ ụgwọ $ 2 nde.
Na 2011, otu nwatakịrị nwanyị dị afọ 8 nke Maui gburu n'ihi nsị nke nkume na-egbu egbu na Pipiwai Trail na Kipahulu nke Oheo Gulch.
Na June 12, 2014, onye njem nleta merụrụ ahụ mgbe ọ gbadara ụkwụ 15 n'akụkụ ugwu na ngalaba Oheo Gulch nke ọdọ mmiri ahụ.
Dabere na weebụsaịtị Hawaii, gohawaii.com, Ọdọ mmiri nke Oheo bụ ọdọ mmiri mara mma mara mma nke mmiri mmiri na-enye. Ọ na-ekwu, na ihu igwe na-ekwe, ị nwere ike itinye mmiri na mmiri dị jụụ, nke iyi ndị dị na Oheo Gulch nke Haleakala National Park na-eri nri. Ogige ahụ na-akwụ ụgwọ $ 10 maka ụgbọ ala ịbanye.